Vaimbova Gurukota Amai Kagonye Votarisirwa Kupihwa Chirango neMusi weChina Mushure Mekuba maComputer
Chikumi 08, 2022
Amai Petronella Kagonye
Vaimbova gurukota rezvevashandi, Amai Pretronella Kagonye, nhasi vabatwa nemhosva yehuori.
Amai Kagonye vawanikwa vaine mhosva panyaya yema computer avanonzi vakapihwa nesangano rePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, kana kuti POTRAZ, kuti vagovere muzvikoro zviri munzvimbo yeGoromonzi yavaimirira muparamende panguva yavaive muhurumende vasamasvitsa kuzvikoro kwaafainira kuendeswa.
Mutongi wedare ramejasitiriti, Amai Vongai Muchuchuti Guwuriro vati Amai Kagonye havana kutsanangura zvinonwisa mvura kuti malaptop makumi maviri avakaiphwa nePOTRAZ akafamba sei.
Amai Muchuchuti vati vachatura mutongo wavo uzere mangwana izvo zvaita kuti Amai Kagonye vaendeswe kujeri reChukurubi Maximum Security Prison vakamirira mutongo uyu mangwana masikati.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition VaObert Masaraure, vati kubatwa kwaitwa Amai Kagonye nemhosva chinhu chakanaka pakuriswana nehuori asi vati vanoona sekuti matare ave kushandiswa kugadzirisa nyaya dzemakakatanwa emune zvematongerwo enyika.
Muna Kurume wegore rino, Amai Kagonye vakachenurwa nematare pane dzimwe mhosva mbiri dzekunzi vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavaive gurukuota rehurumende.
Mumwe aiva muhurumende akabatwa nemhosva yekushandisa chinzvimbo chake zvisirizvo ndiva Samuel Undenge avo vaimbova gurukota remhando dzemoto.
Pane vanhu vakati wandei vanosanganisira vaimbova gurukota rezvematunhu VaIgantious Chombo pamwe nevaimboiva gurukota rezvevashandi , Amai Prisca Mufumira vachine nyaya dziri mumatare vachinzi vakashandisa masimba avo zvizirzvo pavaiva muhurumende.